Maraykanka, Afrika iyo Arrimaha Somalia - BBC News Somali
Maraykanka, Afrika iyo Arrimaha Somalia
Image caption Ciidamada nabad-ilaalinta AMISOM
Masuuliyiin ka tirsan Maraykanka iyo madaxda dalalka Bariga Afrika ayaa magaalada Kampala ku yeeshay kulan ku saabsan arrimaha nabad-ilaalina ee Somalia, halkaasi oo uu ka socdey shir-madaxeedkii AU oo maanta la soo gabgababaynayo.
Kaaliyaha Xoghayaha Arrimaha Dibedda ee Mareykanka u qaabilsan Afrika iyo hoggaamiyeyaasha Afrika qaarkood ayaa kulan adag oo albaabadu u xirnaayeen oo ka dhacey magaalada Kampala ee dalka Uganda waxay kaga doodeen xaaladda Somalia iyo sida loo wajahayo.
Kulankaasi waxaa waddamada Afrika ee weli ka fiirsanaya ciidan ay u diraan Somalia lagu siiyey muddo bil ah oo ay ku soo gudbinbayaan go'aankooda kama dambeysta ah.
Go'aankan ayaa u muuqda hadalo diblomaasiyadeed oo lagu daboolayo is-afgaranwaa loo maleynayo inuu hareeyey kulankaasi, xilli maanta la soo gabagabeynayo shir madaxeedka Afrika oo muddo saddex maalmood ah socdey.
La-taliyaha Madaxweyne Ku Xigeenka Burundi, Karenga Ramadhani ayaa BBCda u sheegey in kulanka gaarka ah ee ay yeesheen madaxda Afrika iyo Kaaliyaha Xoghayaha Arrimaha Dibedda ee Mareykanka u qaabilsan Afrika, Johhnie Carson, si qota dheer loogu lafa gurey xaaladda amaaanka Somalia iyo weliba qorshaha la doonayo in ciidamo dheeri ah loogu diro Somalia.
Kulankaasi oo madaxdii ka soo qeybgashey ay ka mid ahaayeen Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni, iyo Madaxweynaha Tanzania, Jakaya Kikwete ayaa waxaa dalalka Afrika ay ku soo bandhigayeen fikirkooda ku aaddan sida ugu wanaagsan ee ay kaalin uga qaadankaraan hawlaha nabad ilaalinta Somalia, xilli la doonayo in ciidamo dheeri ah la geeyo Somalia si ay amniga u sugaaan una taageeraan dowladda KMG oo iyadu ku tiirsan nabad ilaaliyeyaasha Afrika.
Madaxweyne Kikwete oo halkaasi ka hadley ayaa shirka weydiiyey nabad ilaalinta la doonayo in Somalia laga fuliyo, iyadoo aaneyba marka hore jirin nabadda laga hadlayaa, loona baahan yahay in marka hore nabad la dhaliyo.
Hadalkiisa ayaa u muuqda mid uu ku taageerayo Madaxweyne Museveni oo u ololeynaya in la bedelo awoodaha ciidamada nabad ilaalinta Midowga Afrika ee Somalia ka hawlgala, lagana dhigo mid nabad dhalin ah, taas oo u suuragelin doonta inay dagaallamaan, nabaddana xoog ku dhaliyaan.
Iyadoo dalal badan oo Afrikan ah ay u muuqdaan kuwo ka warwareegaya inay ciidan u diraan Somalia, sababo la xiriira dhaqaale-darro, saad la'aan iyo cabsi ay ka qabaan inay lugaha la galaan colaadda halkaa ka jirta, ayaa waxaa shirka lagu go'aamiyey in dalalka Afrika ee muujiyey rabitaankooda ay ciidan ugu dirayaan Somalia ay muddo afar toddobaad gudohood la yimaadaan go'aan kama dambeys ah oo ay ku qeexayaan inay ciidamo dirayaan iyo in kale.
Go'aankaan ayaa dhanka kale waxaa loo fasiran karaa in weli uu jiro is-maandhaaf iyo cagajiid ku saabsan qaabka loo wajahayo xaaladda Somalia.
Karenga Ramadhani, La Taliyaha Madaxweyne Ku Xigeenka Burundi, waxaa kaloo uu sheegey in shirka looga hadley in mushaharka loo kordhiyo ciidamada AMISOM ee haatan ka hawlgala Somalia, oo sida uu sheegey la siiyo haatan lacag aad uga yar inta ay qaataan ciidamada hawlahaasi oo kale ka qabanay dunida inteeda kale.
Maanta ayaa la filayaa in shir madaxeedka Midowga Afrika la soo gabagabeeyo, isla markaana laga soo saaro war murtiyeed la xiriira agendayaashii ugu cuslaa ee laga doodayey oo ay ka mid ahaayeen amaanka qaaradda, xaaladaha Somalia iyo Sudan iyo weliba la dagaalanka argagixisada.
DAUD AWEYS, BBC KAMPALA